China 30g 50g 100g 250g 500g ဗလာ 8oz caviar သံဗူး ရော်ဘာဝိုင်း စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Byland
ဖော်ပြချက်-အလွယ်ဖွင့်ထားသော caviar သံဗူး၊ ဖုန်စုပ် caviar ဘူးခွံ၊
အရွယ်အစားသင့်တောင်းဆိုချက်အရ အချင်းနှင့် အမြင့်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ:0.23mm အထူ tinplate, ကွဲပြားခြားနားသောအထူရရှိနိုင်ပါသည်။
အလွယ်ဖွင့်ထားသော caviar သံဗူး၊ ဖုန်စုပ် caviar ဘူးခွံ၊
သင့်တောင်းဆိုချက်အရ အချင်းနှင့် အမြင့်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
0.23mm အထူ tinplate, ကွဲပြားခြားနားသောအထူရရှိနိုင်ပါသည်။
1 အပိုင်းအစ / PP အိတ်၊ အချို့အပိုင်းများ / အပြင်ပုံး။(ဥစင် ၊ အတွင်းပိုင်း အဆင် ပြေပါတယ် )
1. Customer ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် လိုအပ်ချက်ကို နားလည်သည်။
2. သံဖြူ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို အတည်ပြုခြင်း။
4. နမူနာအတွက် အနုပညာလက်ရာပုံနှိပ်ခြင်း။
5. နမူနာအတည်ပြုချက်ကို ပုံနှိပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဆောင်သွပ်သေတ္တာများ၊ လက်ဖက်ရည်သေတ္တာများ၊ စာရေးကိရိယာသွပ်သေတ္တာများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ထုတ်ကုန်သွပ်သေတ္တာများ၊ ဆေးသွပ်သေတ္တာများ၊ လကိတ်သံဖြူသေတ္တာများနှင့် အခြားသတ္တုထုပ်ပိုးမှုအစီအစဥ်များကို ပြုလုပ်ရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
1.Q: ငါတစ်ခုလိုတယ်။caviar သံဖြူသင့်စတော့ဆိုဒ်ထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးနိုင်သည် ။ဒီလိုလုပ်ရတာ လွယ်ပါသလား။
A- သံဖြူ၏တည်ဆောက်မှုပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဝိုင်း သို့မဟုတ် ဖန်စီပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော သံဘူးအများစု၏ အမြင့်ကို စိတ်ကြိုက်အမှာစာအတွက် ရှိပြီးသားကိရိယာများဖြင့် အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ချောမွေ့မှုမရှိသော သို့မဟုတ် ရေးဆွဲထားသော သံဘူးများသည် အရွယ်အစား ချိန်ညှိမှုအတွက် ကိရိယာအသစ် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများကို ပေးစွမ်းမည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတစေ ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါသည်။
2.မေး- ထုံးစံတစ်ခုအတွက် မင်းရဲ့စံခဲချိန်ကဘာလဲcaviarသံဖြူ?
A- ရှိပြီးသားကိရိယာများနှင့် သင်၏အနုပညာလက်ရာဖြင့် ၃-၅ ပတ်ကြာသည်။အယူအဆမှ ပြီးမြောက်သည်အထိ ခေါင်မိုးတစ်ခုတည်းအောက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အပြင် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
3.Q: ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မည်ကို သေချာစေရန် မည်မျှစောစီးစွာ အော်ဒါတင်ရမည်နည်း။caviarအားလပ်ရက်တွေမှာ ဗူးခွံတွေ အချိန်မီလာပြီလား?
ဖြေ- တတ်နိုင်သမျှ ကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးက အဓိကပါ။စိတ်ကြိုက်အော်ဒါအတွက် သတ်မှတ်ရက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အား အချိန်ဘောင်ကို အသိပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေးပို့သည့်နေ့မှစ၍ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဝယ်ယူမှုအမှာစာလက်ခံရရှိမှု၊ အနုပညာလက်ရာနှင့် အထောက်အထားအတည်ပြုချက်အတွက် အချိန်ဇယားကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်ပရောဂျက်အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ အပြောင်းအလဲများသည် သင့်မှာယူမှု၏နောက်ဆုံးတင်ပို့မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။လက်ရှိအချိန်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် 0755-84550616 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် စကားပြောပါ။
4.မေး- ကာဗီယာဗူးများသည် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဘေးကင်းပါသလား။ဖော်ပြထားတဲ့ စာတစ်စောင် ရနိုင်မလား။caviarသံဘူးများသည် အစားအသောက် ဘေးကင်းပါသလား။
A: Caviar tins များသည် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များအတွက် လက်ခံထားသော package တစ်ခုဖြစ်သည်။အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ရေကိုအခြေခံသည့် ထိုထုတ်ကုန်များအတွက် အတွင်းပိုင်းအလွှာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် FDA အသိအမှတ်ပြု မှင်များနှင့် အပေါ်ယံအလွှာများကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများထံမှ စာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အား Fortune 500 ဖောက်သည်အများအပြားမှ နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပြီး အစားအသောက်နှင့် ထိတွေ့ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်ပြည့်မီကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အဦအားလုံးသည် ဘေးကင်းသော အရည်အသွေး အစားအစာဌာနမှ SQF2 လက်မှတ်ရရှိထားသည်။
အခမဲ့နမူနာ၊ အမြန်ချောပို့ခ ကောက်ခံပါသည်။
သင့်လိုဂိုနှင့် အနုပညာလက်ရာကို လျှို့ဝှက်ထားမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် မှာယူပါက၊ MOQ နှင့် မတူညီသောအရွယ်အစားများအတွက် အောက်ပါစာရင်းကို ဖတ်ရှုပါ။
ယခင်- 15g-30g-50g-125g-250g ရာဘာအလုံပိတ် အဖုံးပါသော လေဟာနယ် ကာဗီယာသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: 250g နှင့် 500g လွယ်ကူသော Caviar Tin Can_Ring ဆွဲဗူးခွံများ
15g-30g-50g-125g-250g ဖုန်စုပ် caviar သံဘူးခွံ wit...
စိတ်ကြိုက် Tin Box, Tin Cosmetic Containers, လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ, စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်,